Izici | Januwari 2022
Kusho ukuthini izici ekufundweni kwezinkanyezi?
Kusho ukuthini izici ekufundweni kwezinkanyezi? Ekufundweni kwezinkanyezi, isici i-engeli amaplanethi ahlangana ngayo ku-horoscope, futhi naku-ascendant, maphakathi nesibhakabhaka, inzalo, amazulu aphansi, nakwamanye amaphuzu okuthakazelisa izinkanyezi. Isici esiqonde ngqo, kuthiwa siqine noma sibuse kakhulu ekubunjweni komlingiswa noma ekuboniseni ushintsho.
Zisho ukuthini izici zezinkanyezi?
Zisho ukuthini izici zezinkanyezi? Ekufundweni kwezinkanyezi, isici i-engeli amaplanethi ahlangana ngayo ku-horoscope, futhi naku-ascendant, maphakathi nesibhakabhaka, inzalo, amazulu aphansi, nakwamanye amaphuzu okuthakazelisa izinkanyezi. Isici esiqonde ngqo, kuthiwa siqine noma sibuse kakhulu ekubunjweni komlingiswa noma ekuboniseni ushintsho.
Kwenzekani lapho iMars ihlanganisa iSaturn? ISaturn ayizwani namaplanethi amaningi ikakhulukazi ngeLanga, iNyanga neMars. Kepha kusibonakaliso sesitha noma nge-mutual factor bonakalisa impilo yomuntu onalesi simo esingesihle. Ngokuyinhloko iSaturn iyabanda futhi ihamba kancane ngenkathi iMars ishisa futhi iyashesha. 26. 2016.
Ingabe iMars iyefana ne-ascendant?
Ingabe iMars iyefana ne-ascendant? I-Ascendant iyisibonakaliso se-zodiac uqobo; ukukhathazeka ngawe, ukuzazi nokuthembela kuwe. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuyisibonakaliso esifanayo se-zodiac njenganoma iyiphi yalezi: iMercury, iNyanga, iMars, iLanga noma iVenus.
Kusho ukuthini iMercury ascendant?
Kusho ukuthini iMercury ascendant? UMERCURY uchaza amandla engqondo, ngakho-ke unamandla kakhulu lapho ubekwa ku-ascendant. Ngokuvamile kunika ikhono lebhizinisi, kepha ukuba yiplanethi eguqukayo kuthinteka kakhulu yithonya lezici.
Yimaphi amaplanethi aqukethe izindlu?
Yimaphi amaplanethi aqukethe izindlu? Ukuphikiswa Yilokho esikubiza ngokuthi yi-7th house factor.Isikwele Kulapho amaplanethi eyindlu yesi-4 / indlu yesi-10 komunye nomunye.Sextile Kulapho amaplanethi eyindlu yesithathu / indlu yesi-11 komunye nomunye.Imfundiso Yikho esikubiza ngendlu yesi-5 nelesi-9 isici sendlu.I-Quincunx Kulapho amaplanethi eyindlu yesi-6 / indlu yesi-8 komunye nomunye.
Kusho ukuthini ukuthuthuka ekufundweni kwezinkanyezi?
Kusho ukuthini ukuthuthuka ekufundweni kwezinkanyezi? Ishadi elithuthukile alithathi indawo yeshadi lakho lokuzalwa, liyisandiso seshadi lakho lokuzalwa. Imvamisa kubhekiswa njengokuhamba komuntu siqu, ukuqhubekela phambili okuhamba kancane kuhamba kuzungeze izimpawu zakho ezishintsha ishadi, futhi uxhuma nawo wonke amaplanethi bese ukhomba eshadini lakho lokuzalwa.
Kusho ukuthini iJupiter conjunct Pluto?
Kusho ukuthini iJupiter conjunct Pluto? I-Jupiter conjunct Pluto natal inikeza isidingo esinamandla ngokumangalisayo sokuyenza ibe nkulu emhlabeni. Ufuna amandla nethonya futhi wenze izinhlelo zokuvelela ukuze uphumelele emazingeni aphakeme kakhulu. Ukushisekela kwakho okukhulu nokuvelela kukwenza uzimisele, uphikelele, futhi kwesinye isikhathi ube nonya.
Ingabe iMercury iyahambisana neMars?
Ingabe iMercury iyahambisana neMars? IMars neMercury bazoba nesihlanganisi esisondelene kakhulu samaplanethi amabili kulo nyaka ngoJuni 18, 2019. Babheke ngokusondelana entshonalanga ngemuva kokushona kwelanga. Bazosondelana kakhulu ngoJuni 17, 18 no-19.10. 2019.
Kuyini ukubaluleka kweNyanga ihlangana neNode Node kuma-synastry?
Kuyini ukubaluleka kweNyanga ihlangana neNode Node kuma-synastry? Isici seNyanga esihlanganisayo se-node synastry sisekela ukukhula kwabo bobabili abalingani ebudlelwaneni. Umuntu waseNyangeni wenza umuntu we-node yasenyakatho azizwe ephephile futhi enakekelwa, futhi bakhombisa umuntu we-node yasenyakatho ukuthi angakhula kanjani ngokomoya nangokomoya.8. 2020.
Yini eboniswa ishadi elihlanganisiwe?
Yini eboniswa ishadi elihlanganisiwe? Ekufundweni kwezinkanyezi, ishadi elihlanganisiwe yishadi elenziwe phakathi kwamaplanethi phakathi kwezinkanyezi ezimbili noma ngaphezulu. Ngokusho kwababhula ngezinkanyezi, ishadi elihlanganisiwe lizonikeza imikhondo ngobunjalo nomsebenzi wobudlelwano.
Yini izici zokuhamba?
Yini izici zokuhamba? Njengoba igama lalo lisho, ukuhamba kwezinkanyezi kufaka indlela yokuhumusha ukuhamba okuqhubekayo kwamaplanethi njengoba ehambisa i-horoscope. Lokhu kuvame ukwenzelwa ukuzalwa noma Ishadi laseNatali lomuntu othile. Imbuyiselo ebaluleke kakhulu yilezo zamaplanethi angaphandle iJupiter neSaturn.
Zisho ukuthini izici ekufundweni kwezinkanyezi?
Zisho ukuthini izici ekufundweni kwezinkanyezi? Ekufundweni kwezinkanyezi, isici i-engeli amaplanethi ahlangana ngayo ku-horoscope, futhi naku-ascendant, maphakathi nesibhakabhaka, inzalo, amazulu aphansi, nakwamanye amaphuzu okuthakazelisa izinkanyezi. Isici esiqonde ngqo, kuthiwa siqine noma sibuse kakhulu ekubunjweni komlingiswa noma ekuboniseni ushintsho.